Sidee loo helaa Shaqo Singapore? - ALinks
Haddii aad ka fiirsaneyso inaad ka shaqeyso Singapore, waxaa jira war wanaagsan. Daryeelka caafimaadka, gaadiidka, waxbarashada, aerospace, caymiska, utility, biomedical, iyo warshadaha dhismaha dhamaantood si xoog leh ayey u qorayaan shaqaalaha.
Suuqa shaqada ee Singapore sidoo kale waxaa laga arkay isbadal dhowaan dhacay: shaqo bixiyayaashu waxay qorayeen soogalooti badan, oo hadda fadhiya lix ka mid ah toban meelood (shan ka mid ah tobankiiba 20019) In ka badan 900,000 oo ajaanib ah ayaa ka shaqeeya Singapore, iyagoo buuxinaya shaqooyin isugu jira dhismo illaa cad-cad iyo shaqada, taas oo ka dhigeysa saddex meelood meel dadka 2.73 milyan ee shaqeeya, u oggolaanaya dhaqaalaha si loo ballaariyo marka loo eego awoodda shaqaalaha maxalliga ah.
Fursadaha heer gelitaan ayaa wali la heli karaa, taas oo war wanaagsan u ah qalin jabiyaasha dhowaan. In ka badan 30,000 oo shaqo ayaa la abuuri doonaa sanadkan, sida uu sheegay Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Lim Hng Kiang, iyadoo 6,000 ay ka imaanayaan maalgashiyo cusub oo sanadkan soo galaya Singapore.
In kasta oo ay weli jiraan rajo badan oo shaqo oo ka jirta Singapore, waa inaad marka hore ogaataa halka laga raadinayo.
Tallaabada ugu horreysa ee shaqo looga helo Singapore:
Tallaabada ugu horreysa ee shaqo lagu helo Singapore waa in la baaro warshadaha aad xiisayn karto. Sida ugu fudud ee aad shaqo ku heli karto waxaa go'aamiya mihnadda aad dooratay. Meelaha qaarkood si xawli ah ayey u sii fidayaan, halka kuwo kalena ay gaareen heer istaag ah.
Warshadaha dalxiiska ee Singapore waa ay kobcayaan, taas oo ay ugu wacan tahay dhawaanta la aasaasay goobo dalxiis oo waaweyn iyo goobo dalxiis oo raaxo leh.
Singapore waxay leedahay muuqaal horumarineed oo dhexdhexaad ah laakiin koraya, sidaa darteed sayniska kombiyuutarka ayaa caan ku ah sidoo kale.
1. Soo saaraha Badeecada
Doorka- software Developer
Nooca Warshadaha Adeegyada IT & La-tashiga
Deegaanka Waxqabadka - Barnaamijka softiweerka IT-ga - Barnaamijyada barnaamijka, Dayactirka
Nooca Shaqada- Waqti buuxa, Joogto ah
Qaybta Doorka ——- Barnaamijyada & Naqshadeynta
2. Maareeyaha Horumarinta Ganacsiga- Singapore
Doorka- Iibka / Maamulaha Horumarinta Ganacsiga
Aagga Shaqeynta- Sales, Tafaariiqda, Horumarinta Ganacsiga
Qaybta Doorka- Sales Tafaariiqda
Waxaad codsan kartaa a fiiso shaqo waxay kuxirantahay aqoontaada mar hadaad aqbashay shaqada oo aad dhameystirtay faahfaahinta.
Khubaro ajnabi ah ayaa had iyo jeer lagu soo dhaweynayaa Singapore, helitaankana kaarka shaqaalayntu waa inaysan dhib noqon.
Xirfadleyda ajnabiga ah ee xilalka sare haysa waa inay kasbadaan ugu yaraan SGD3,300 bishiiba waana inay lahaadaan aqoon ku habboon oo ay ku helaan Kaarka Shaqada.
EntrePass - Tani waxaa loogu talagalay ganacsatada mustaqbalka! Ganacsatada ajaanibta ah ee doonaya inay shirkad cusub ka furaan Singapore waxay u baahan yihiin inay codsadaan kaarkaan.
Si aad u soo gudbiso arjigaaga, waa inaad bixisaa khidmadda diiwaangelinta oo aan la soo celin karin. Waxay qaadan doontaa 7 maalmood oo shaqo si looga shaqeeyo arjiga onlaynka ah. Waxay ku qaadan kartaa ilaa 5 toddobaad codsashada gacanta.
U ISTICMAAL SAYLADAN IN LOOGU TALAGALAY SHAQADA-
Sida shaqo looga helo Singapore
Shuruudaha fiisaha Malaysia
5 maqaayadaha Indian Indian ugu Weyn ee Thailand
Marabtaa inaad lacag dhigato si aad u sahamiso oo aad ugu fuliso riyooyinkiinna Malaysia .. eeg eeg !!
Shuruudaha Visa ee Jarmalka
Fiisaha Hong Kong ee Hindida